Daawo: Xildhibaan Mahad Salaad oo shaaciyay sida ay maanta wax u dhaceen - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Xildhibaan Mahad Salaad oo shaaciyay sida ay maanta wax u dhaceen
Daawo: Xildhibaan Mahad Salaad oo shaaciyay sida ay maanta wax u dhaceen
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay qalalaasihii maanta laga sameeyay xarunta uu ku yaallo hoolka doorashada, halkaasi oo markii hore laga hor istaagay inay galaan xildhibaanada.
Mahad Salaad ayaa sheegay in kooxda Villa Somalia ay ka cabsi qabto in sidii shalay ay faro madhan kala laabato doorashada Guddoonka Golaha Shacabka, islamarkaana ay doonayaan in la fashilayo doorashada.
“Hoolka ayaa hadda joogna Xildhibaanada saaxiibadaya ah waxaan ugu baaqeyna inay hoolka yimaadan. Dalka meel dheer ayaa laga keenay, nimanka hadda intaas oo isbaaro ah u dhiganaya Xildhibaanada waa niman aan doorasho rabin waaye oo raba in dalka dib u celiyaan,” ayuu yiri.
Waxa uu hadalkiisa sii raaciyay “Wixii shalay ka raacay Aqalka Sare oo ay ugu fashilmeen dadkii ay dhisayeen in hal qof usoo bixi waayay ayey aamisan yihiin in dhinacaas oo kale u socda Golaha Shacabka. Waxay rabaan inay carqaladeeyan oo doorashada la fashiliyo. Kama yeelayno, meesha waa imanay waa joogna.”
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa waxa kale oo uu Mudaneyaasha kale ugu baaqay inay soo xaadiraan hoolka, si ay u dhacdo doorashada guddoonka, taasi oo ay si weyn uga soo horjeedo Villa Somalia inay qabsoomto maanta.
“Waa in aan juhdigeena oo dhan isugu geyna sidii ay maanta u dhici laheyd doorashada oo aan u dooran laheyn guddoonka, si dalka iyo dadkaba loo bad-baadiyo.”
Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka ayaa ka daahday in la bilaabo waqtigii lagu ballamay, kadib markii xildhibaannada qaar aysan gaarin hoolka doorashada, oo loo diiday inay dhaafan baraha kontorool.
Ciidamada Booliska ayaa iridaha laga galo garoonka oo ay ku taallo goobta ka dhaceyso doorashada ku celinayay xildhibanaada, si aysan uga sii gudbin oo u gaarin goobta doorashada Guddoonka loo diyaariyay.
Hase yeeshe waxaa jira tiro xildhibaano ah oo gudbay, mana cadda inta ay le’eg tahay tiradooda iyo haddii ay ku filan yihiin inuu qabsoomo kulanka maanta.